किन भए संसद विघटनको पक्षमा विप्लव ? – समावेशी
किन भए संसद विघटनको पक्षमा विप्लव ?
बुधबार, पौष २९, २०७७ | ९:११:४५ |
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पुस ५ गतेको संसद् विघटनसँग विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ गाँसिएको बताउँदै मुख्यतः दुई कारण औँल्याएका छन् । ‘पहिलो, पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीचको अपवित्र एकता । दोस्रो, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेप । एउटा दलाल पँुजीवादी सत्ताको असफलता, अर्को सरकारी पार्टी र गुटहरूको असफलता । एउटा दलाल पँुजीपति वर्गभित्रको स्वार्थ संघर्ष, अर्को सरकारी पार्टीभित्रका गुटहरूको संघर्ष ।’
‘यो कुनै आकस्मिक घटना होइन बरु तीन दशकको असफलतासहित आइरहेको संसदीय व्यवस्थाकै नयाँ संकट मात्र हो । यो केपी ओलीको सरकार भएका कारणले मात्र होइन, अरुको सरकार भए पनि ढिलो चाँडो हुन्थ्यो ।’
वार्ता र उपयोग
सरकारले वार्ता टोली बनाएर हामीसँग छलफल गरेको छैन । अनौपचारिक कुरा भएका हुन्, यद्यपि ती निकै गम्भीर र मर्मस्पर्शी थिए । यसमा उपयोगको कुनै अर्थ नै छैन ।
कर अनि कारबाही
हामीमाथि जसरी प्रतिबन्ध लगाइयो, यो नै अन्यायपूर्ण एवं अनुचित छ । देशलाई कर छली गर्ने र देशको धन उडाउन खोज्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग पूरा गर्नु हाम्रो के अपराध थियो ? जनताको करबाट जम्मा भएको कोषलाई स्वाहा पार्ने भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नु के गल्ती भयो ? न्यायको आवाज उठाइरहेका हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई गोलीले हान्न र जेलनेलमा हाल्न किन प¥यो ? हामीलाई शान्तिपूर्ण रूपले जनतामा जानबाट किन रोक्ने !?
निश्चय पनि नेताहरूको सहादत, गिरफ्तारी र जेलनेलले पार्टीलाई क्षति पुगेको छ । तर, यो कुनै आत्मसमर्पण या धोकाधडी गरेको मामिला होइन । यो सुन्दर भविष्यका लागि क्रान्तिले माग गरेको मूल्य चुकाएको विषय हो । क्रान्तिमा गरिने बलिदान र दुःख कष्टले पार्टीलाई कमजोर होइन स्पातिलो र ऊर्जाशील बनाउँछ । हाम्रो पार्टी यतिबेला साँच्चैको कम्युनिष्ट पार्टी बन्दै गएको अनुभूति भएको छ ।
यसबीच कमरेड गोपाल किराँतीसँग समस्या छ भन्ने कोणबाट कुरा उठे । उहाँसँग कुनै समस्या नै थिएन र छैन । त्यस्तै, क.मोहन वैद्य (किरण) को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) मित्र पार्टी हो । हाम्रो बीचमा राष्ट्र र जनताका समस्यालाई समाधान दिनका लागि मैत्रीपूर्ण सहकार्य भइरहेको छ ।
चीन र एनसेल
सरकारले हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीन जाने–आउने क्रम कम भएको छ । चीनसँग जस्ता भेटघाट र छलफल हुन्थे त्यसमा कुनै अन्तर आएको छैन ।
जसरी चीन सम्बन्धलाई लिएर हामीलाई आर्थिक विषयमा बद्नाम गर्न खोजिन्छ, त्यसबारे त कल्पना पनि नगर्नुस् † कसैले पैसाको कुरा गरेको भए कुनै दिन अवश्य सत्य बोल्नुपर्ने छ ।
एनसेलले देशप्रति गरेको अपराधका कारण कारबाही गरेको हो । यदि, कारबाही नगरेको भए एक पैसा पनि राज्यले पाउने थिएन । कम्तीमा २२ अर्ब नगद राज्यले पायो । विडम्बना, राज्यले नै बाँकी कर तिर्नु पर्दैन भनिरहेको छ ।
एनसेलले राज्यको बाँकी कर तिर्छ÷तिर्दैन उसको कुरा भयो तर एनसेलले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको जनसरकारलाई पनि कर तिर्नुचाहिँ पर्छ । हैन भने हाम्रो प्रभाव क्षेत्रका जनतामा एनसेल बन्द हुन्छ ।
व्यक्ति हत्या गर्ने नीति पार्टीको हुने कुरै छैन । मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठले १० हजार नदिएकाले हत्या गरेको आरोप झुट हो । राजेन्द्र श्रेष्ठ मारिएको घटना दुःखद हो तर त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन राज्यको गलत व्यवहार र नीतिले भएको हो । हाम्रो विनम्र आग्रह छ कि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरौं घटना कसरी घट्यो र किन घट्यो ।
राजेन्द्र स्कुल पढाउने शिक्षक अवश्य हो तर उनलाई राज्यले शिक्षकको गरिमामय पेशाविपरित सुराकीको रूपमा प्रयोग गरेर जघन्य अपराध गरेको छ । यसका प्रमाण पर्याप्त छन् । उनलाई बारम्बार सम्झाउँदा पनि दमन गराउने कार्य रोकेनन् । सुराकीका कारण कमरेडहरू गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । सीसीएम कमरेड बालबाल बच्नुभयो । केन्द्रीय नेताहरूलाई घेरा हालियो । पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । जनतालाई नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई सहयोग गरेमा तातो गोली खुवाउनुपर्छ भन्दै आतंकित पार्ने काम भयो । फेरि पनि सम्झाउन जाँदा यस्तो घटना घट्यो । शिक्षक साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ राज्यको यस्तो दमनकारी कार्यको मतियार नबनौं । हामीले सच्याउनुपर्ने विषय सच्याउँछौं ।
अब संयुक्त मोर्चा
देशको स्वाधीनता, जनताका अधिकार, दैनिक जीवनका समस्यालाई हेर्ने, बुझ्ने र समाधानबारे दृष्टिकोण मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको सुदृढ र दीर्घ सहकार्य नै रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हो । नेपालमा लामो समयदेखि कम्युनिष्टले राज्य रूपान्तरण र संयुक्त मोर्चाका लागि प्रयत्न गर्दै आएका हुन् तर हालसम्म सफल हुन सकेको थिएन । कि पार्टी एकतामा जाने कि कार्यगत एकतासम्म पुगेर फर्किने हुँदै आएको थियो । तर, यो समयमा हामी चार पार्टी रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएर देशलाई संसदीय व्यवस्थाको घेराभित्रबाट निकाली जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजान सयुक्त मोर्चा बनाउन सफल भएका छौं । यसर्थ यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई दलाल पँुजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको उत्पीडन र देशलाई साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एवं अतिक्रमणबाट मुक्त गरेर जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रहेको छ ।